Shiinaha shiidan warshad budada mica iyo alaab-qeybiyeyaasha. Huajing
Waxyaabaheena taxanaha ah ee loo yaqaan 'mica calcined mica' waxay qaataan habka fuuqbaxa heerkulka sare si ay uga dhigaan mica biyo luminta, haynta hantida gudaha. Habka wax soo saarku wuxuu u fiican yahay deegaanka mana laha wasakhda labaad. Waa doorashada ugu fiican walxaha alxanka gaarka ah, qalabka dhismaha guud iyo insulators koronto.
Miccin Calicaed (Qalabka Alxanka)
Shayga Midab Caddaan (Shaybaar) Cabbirka walxaha (μm) Daahirnimo (%) Waxyaabaha Magnetic (ppm) Qoyaanka （%） LOI (650 ℃) pH Cufnaanta Jumlada (g / cm3) FIIRO GAAR AH
Calcined Mica （Waxka alxanka）
F-150 Casaan dahab ah —— 50 ～ 100 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.22
F-200 Casaan dahab ah —— 40 ～ 75 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.22
F-300 Casaan dahab ah —— 30 ～ 55 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.19
Huajing budada mica fasalka maadada dhismaha waa taxane ah alaabada mica aasaasiga ah oo lagu farsameeyo mica flakes oo ka timid Lingshou, gobolka Hebei. Cabbirka walxaha ee badeecada ayaa daboolaya inta udhaxeysa 5mm ilaa 10um Nidaamka isdaahirinta ayaa si isdaba-joog ah loo soo saaray in ka badan 40 sano. Waqtigan xaadirka ah, waxaa badanaa loo adeegsaday guddiga qurxinta gudaha, guddiga dusha ka laalaada, tuubbada bullaacad ee isku dhafan, qalabka dhismaha ee deegaanka u habboon, daaqadaha birta ah ee caagga ah iyo albaabada, marmar macmal ah iyo wixii la mid ah Dahaarka la xareeyay, waxaa si xasilooni ah loogu adeegsaday warshadaha dhismaha, sida rinjiga derbiga dibedda, rinjiga calaamadda waddada, malaasyada, ranjiga culus ee ka hortagga waxyeellada. Qalabka alxanka, dhoobada, saliida qodida, walxaha khilaafaadka, mashaariicda ka hortaga bulaacada, hagaajinta carrada iyo goobo kale oo badan oo buuxin ah, mica waa mid muhiim u ah buuxinta waxqabadka. Mica waxay door weyn ka qaadatay badbaadinta tamarta iyo kordhinta waxtarka.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya mica calcined iyo mica caadiga ah:
1. Maaddada ugu weyn waa biyaha. Qoyaanka kujira mica calcined ayaa kayar 0.01%, tan mica-ga caadiga ahna wuu kayaryahay 0.5%.
Midda labaad waa gubasho lumis. Luminta gubashada ee mica calcined ayaa kayar 0.1%; luminta gubashada ee mica-ga caadiga ah ayaa ka yar 1.5%.
2. Midabka Muscovite-ka caadi ahaan waa cadaan ama lacag-cad, laakiin calcin ka dib, waxay noqon kartaa casaan, naxaas, ama bunni khafiif ah.
3. Midabkiisa dhalaalaya ee dahabka ah, mica calcined-ka ayaa lagu fadilay dhinacyada qurxinta, jaakadaha derbiyada iyo rinjiga farshaxanka, iyo sidoo kale hogaaminta wadada alxanka-dhamaadka sare maadama ay ka kooban tahay waxyaabo gaar ah
Hore: Dabiiciga Muscovite budada mica
Xiga: Dabiiciga mica budada
Mica gaar ah oo loo yaqaan 'Calcined Mica For Alxid Advanced'
Mica gaar ah oo loo yaqaan 'Calcined Mica For Electrode'
Mica gaar ah oo loo yaqaan 'Calcined Mica For Alxid